Ogaden News Agency (ONA) – Kulan Ay TPLF Maraykanka Kuqaban Rabtay oo Fashilmay.
Kulan Ay TPLF Maraykanka Kuqaban Rabtay oo Fashilmay.
Wararka aan kahelayn wadanka Maraykanka ayaa sheegaya in uu fashil kudhamaaday shir abaabul iyo lacago uruursi ah oo ay kooxda TPLF uqabatay qaar kamid ah dadka Itoobiyaanka ah ee kudhaqan Maraykanka.
Sida xogta aan kuhelayno Safiir kusheegaya wayaanaha ufadhiya magaalada Washington DC, ee caasimada wadanka Maraykanka Ambassador Kassa Teklewara ayaa isku dayay in uu qabto shir uu warbixin been been ah kusiiyo dadka ree Itoobiya, isla markaana uu ku uruursado lacago faro badan.
Kulankan oo ku qabsoomay dhinaca khadka Telafoonka ayaa lasheegay in ay kasoo qayb galeen dad matalayay 11 Gobol oo Maraykanka ah waxaana lasheegayaa in uu Kassa Teklewara bilaabay khudbad aan nuxur lahayn oo been lasoo dhoodhoobay ah, wuxuuna khudbadiisa diirada kusaaray sidii dhaqaale loogu heli lahaa biyo xidheenka dhaqaale la’aanta u istaagay ee wabiga Nile.
Hase yeeshee qaar kamid ah dadkii shirka kasoo qayb galay ayaa su’aalo ad adag oo uu kajawaabi waayay waydiiyay safiir kusheega iyagoo sheegay in ay u baahan yihiin in run loogu khudbadeeyo.
Kadib su’aalihii kululaa ee lawaydiiyay Kassa Teklewara waxaa bilowday guux iyo in uu shirkii socon waayo isla markaana uu halkaas ku istaago, waxaana lasheegayaa in safiir kusheego uu shirka kabaxay kadib markuu buuqu siibaday.
Kooxda TPLF ayaa ka caagtay in ay qabato shir toos ah oo dibada kaqabsooma waxayna kooxdu miciin biday in ay dhinaca isgaadhsiinta kulamo kuqabtaan, hase yeeshee isku daygaas ayaa u muuqda mid fashilmay.